9 Mmụọ ozi nke ise wee fụọ opi ya.+ M wee hụ otu kpakpando+ nke si n’eluigwe daa n’ụwa, e nyekwara ya mkpịsị ugodi+ nke olulu abis.+
2 O wee meghee olulu abis, anwụrụ ọkụ+ wee si n’olulu ahụ pụta dị ka anwụrụ ọkụ nke si ná nnukwu ekwú ọkụ,+ anwụrụ ọkụ nke si n’olulu ahụ mekwara ka anyanwụ na ikuku gbaa ọchịchịrị.+
3 Igurube+ sikwa n’anwụrụ ọkụ ahụ pụta n’ụwa; e wee nye ha ikike, otu ikike ahụ nke akpị+ ndị dị n’ụwa nwere.
4 A gwakwara ha ka ha ghara ibibi ahịhịa ndụ ndị dị n’ụwa ma ọ bụ ihe ọ bụla na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ osisi ọ bụla, kama ka ha mekpaa naanị ndị mmadụ na-enweghị akara nke Chineke n’egedege ihu ha+ ahụ́.
5 E nyekwara igurube ndị ahụ ikike, ọ bụghị ka ha gbuo ha, kama ka ha mekpaa ha ahụ́+ ruo ọnwa ise, mmekpa ahụ́ e mekpara ha dịkwa ka mmekpa ahụ́ mmadụ na-enwe mgbe akpị+ gbara ya.
6 N’oge ahụ, ndị ahụ ga-achọ ọnwụ+ ma ha agaghị achọta ya ma ọlị, ha ga-achọkwa ịnwụ ma ọnwụ ga na-agbara ha ọsọ.
7 Igurube ndị ahụ yiri ịnyịnya+ ndị a kwadebere maka agha; ha kpukwa ihe yiri okpueze ndị dị ka ọlaedo n’isi ha, ihu ha dịkwa ka ihu mmadụ,+
8 ma ha nwere ntutu isi nke dị ka ntutu isi ụmụ nwaanyị.+ Ezé ha dịkwa ka nke ọdụm;+
9 ha nwekwara ihe mgbochi obi+ ndị yiri ihe mgbochi obi ígwè. Ụda nku ha yikwara ụda ụgbọ ịnyịnya+ nke ọtụtụ ịnyịnya na-agbaga n’agha.+
10 Ha nwekwara ọdụ ma na-agba agba dị ka akpị;+ ikike ha nwere imerụ ndị ahụ ahụ́ ruo ọnwa ise dịkwa n’ọdụ ha.
11 Ha nwere otu eze na-achị ha, bụ́ mmụọ ozi nke abis.+ Na Hibru, aha ya bụ Abadọn,* ma na Grik, aha ya bụ Apọlịọn.*+
12 Otu ahụhụ agafewo. Lee! Ahụhụ abụọ ọzọ+ na-abịa ma ihe ndị a gasịa.
13 Mmụọ ozi nke isii+ wee fụọ opi ya.+ M wee nụ otu olu+ nke si na mpi ndị dị n’ebe ịchụàjà ahụ e ji ọlaedo rụọ+ nke dị n’ihu Chineke
14 ka ọ na-agwa mmụọ ozi nke isii ahụ nke ji opi ahụ, sị: “Tọpụ ndị mmụọ ozi anọ+ ahụ e kere agbụ+ n’osimiri ukwu bụ́ Yufretis.”+
15 E wee tọpụ ndị mmụọ ozi anọ ahụ, bụ́ ndị a kwadebere maka oge awa na ụbọchị na ọnwa na afọ ahụ, igbu otu ụzọ n’ụzọ atọ nke ndị ahụ.
16 Ọnụ ọgụgụ nke ụsụụ ndị agha ịnyịnya ahụ dị iri puku abụọ ụzọ puku iri:* Anụrụ m ọnụ ọgụgụ ha.
17 Otú a ka m si hụ ịnyịnya ndị ahụ n’ọhụụ ahụ, hụkwa ndị nọ n’elu ha: ha nwere ihe mgbochi obi nke na-acha ọbara ọbara dị ka ọkụ, na-achakwa anụnụ anụnụ dị ka nkume hayasịnt, na-achakwa odo odo dị ka sọlfọ; isi ịnyịnya ndị ahụ dịkwa ka isi ọdụm,+ ọkụ na anwụrụ ọkụ na sọlfọ+ sikwa n’ọnụ ha na-apụta.
18 Ihe otiti atọ ndị a gburu otu ụzọ n’ụzọ atọ nke ndị ahụ, ya bụ, ọkụ na anwụrụ ọkụ na sọlfọ ndị si n’ọnụ ha pụta.
19 N’ihi na ikike nke ịnyịnya ndị ahụ dị n’ọnụ ha na n’ọdụ ha; n’ihi na ọdụ ha dị ka agwọ,+ nweekwa isi, ha na-ejikwa ha emekpa ndị mmadụ ahụ́.
20 Ma ndị fọdụrụ n’ime ndị ahụ a na-ejighị ihe otiti ndị a gbuo echegharịghị n’ihe ha ji aka ha na-arụ,+ ka ha wee ghara ife ndị mmụọ ọjọọ+ na arụsị e ji ọlaedo na ọlaọcha+ na ọla kọpa na nkume na osisi mee, bụ́ ndị na-apụghị ịhụ ụzọ ma ọ bụ ịnụ ihe ma ọ bụ ije ije;+
21 ha echegharịghịkwa n’igbu ọchụ ha+ ma ọ bụ n’ime mgbaasị ha+ ma ọ bụ n’ịkwa iko ha ma ọ bụ n’izu ohi ha.
^ Mkp 9:11*
Okwu Hibru bụ́ Abadọn pụtara “mbibi.”
Okwu Grik bụ́ Apọlịọn pụtara “onye mbibi.”
^ Mkp 9:16*
Ya bụ, narị nde abụọ.
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D66%26Chapter%3D9%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl